China Service karịrị counter ụlọ ahịa friji CSS-2011SGA ụlọ ọrụ na-emepụta | Nenwell
Ọrụ karịrị counter ụlọ ahịa friji CSS-2011SGA
Ọ dị ezigbo mkpa ịchọta ijere ozi na-enweghị ike ịgbanwe maka oghere dị yana igosipụta mkpa. Nenwell ọnọde a dịgasị iche iche nke ozi n'elu refrjiraeto friji kwesịrị ekwesị ka ọtụtụ ebumnuche na-aghọta na igwe anaghị agba nchara. Igwe ngosi Refrigerated, ngwa nju oyi egosiri na gwọọ anụ mebere bụ isi ihe odide a. You nwere ụlọ ahịa achịcha dị iche iche? Anyị na-eme ka ngosipụta anụ dị iche iche dị iche iche nwere ike ịhazi ha. Enwere ike iji ụfọdụ n'ime friji arụ ọrụ n'elu ebe nchekwa dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ onwe onye. Ngwaahịa niile na-akwado ibe ha n'ụzọ zuru oke na ụdị ụlọ ahịa na ụlọ dịnụ. N'ihi na onye ọ bụla counter a na agba chaatị dị: họrọ kasị nso gụchara gị ahịa ịke. Yourlọ ahịa gị ọ siri ike? Ọ bụghị nsogbu: Nenwell nwere azịza maka gị. Na-eje ozi n'elu counters na lowered miri iji tinye ha na obere ụlọ ahịa. Maka ụfọdụ n'ime ha, ọ dị iko ma ọ bụ ogologo iko. Chọpụta ngosipụta Nenwell niile nke juru afọ ma mejuo mkpa ụlọ ahịa gị niile.
Nke a bụ a na-eje ozi-n'elu counter na ogologo inwego-elu iko, maka ngosipụta nke anụ, mmiri ara ehi na ngwaahịa, ọhụrụ na tupu juru n'ọnụ na ngwaahịa, oké uru slimline eje ozi n'elu counter, ezigbo maka sandwiches na deli mepụtara. Ndị kabinet dị maka niile ịnya isi refrigerated n'okpuru nchekwa, ihere iko ngosi shelf na igwe anaghị agba nchara azụ ọrụ n'elu.
Nke gara aga: Multideck nkwụnye Na marklọ Ahịa Mkpụrụ Akwukwo nri Ngosi BLF-1080
Osote: Ugboro abụọ ikuku ventilated agwaetiti DII-240
• Ọdịdị dị mma ma mara mma, mmetụta ngosipụta dị oke mma
• R404a / R744 refrjiraeto.
• Gbanyụọ-okirikiri defrost, ebelata ume oriri.
• Ngwaahịa na-eji nnukwu oru oma evaporator, ọ enwekwu okpomọkụ mgbanwe ọnụego, na refrjiraeto ike buru ibu.
• Enwere valvụ solenoid maka kabinet ọ bụla.
Anyị na-etinye nzacha n'ihu valvụ solenoid iji belata nsogbu na oge nke echichi, belata ihe ize ndụ nke unyi mkpọchi.
• Nhọrọ elu arụmọrụ ofufe nwere ike họrọ dị ka ndị ahịa chọrọ.
• The iko eweli Ọdịdị damping ikuku mgbapụta mmiri, iko nwere ike ịkwụsị ọ bụla angle.ọ bụ ihe dị mma maka iwepụta mmanụ na ọrụ ndị ọzọ kwa ụbọchị.
Olu dị irè (L)
Ugboro abụọ okpomọkụ ventilated agwaetiti friza DI ...
-86 Celsius C Ultra Low okpomọkụ Ọnụ-irè friza